Idatha Enhle, Isibopho Esikhulu: Indlela Ama-SMB Angayithuthukisa Ngayo Imikhuba Yokuthengisa Engafihli | Martech Zone
Idatha Enhle, Isibopho Esikhulu: I-SMBs Ingayithuthukisa Kanjani Imikhuba Yokuthengisa Engafihli
ULwesihlanu, February 4, 2022 ULwesihlanu, February 4, 2022 Meghan Bazaman
Idatha yekhasimende ibalulekile kumabhizinisi amancane naphakathi nendawo (I-SMBs) ukuqonda kangcono izidingo zamakhasimende nendlela asebenzisana ngayo nomkhiqizo. Emhlabeni oqhudelana kakhulu, amabhizinisi angagqama ngokusebenzisa idatha ukuze akhe ukuzizwisa okunomthelela, komuntu siqu kumakhasimende awo.
Isisekelo sesu ledatha yekhasimende elisebenzayo ukwethenjwa kwamakhasimende. Futhi ngokukhula okulindelekile kokumaketha okusobala okwengeziwe okuvela kubathengi nabalawuli, asikho isikhathi esingcono sokubheka ukuthi uyisebenzisa kanjani idatha yekhasimende nokuthi ungayithuthukisa kanjani imikhuba yokumaketha ehlakulela ukwethembeka nokwethenjwa kwamakhasimende.
Imithetho ishayela imithetho yokuvikela idatha enolaka
Amazwe afana ne-California, Colorado, neVirginia asebenzise izinqubomgomo zawo zobumfihlo zokuthi amabhizinisi angaqoqa futhi asebenzise kanjani idatha yekhasimende. Ngaphandle kwe-US, uMthetho Wokuvikelwa Kolwazi Lomuntu Siqu wase-China kanye ne-EU's General Data Protection Regulation zombili zibeka imikhawulo yokuthi idatha yomuntu siqu ingacutshungulwa kanjani.
Ukwengeza, abadlali abakhulu bezobuchwepheshe bamemezele izinguquko kuzinqubo zabo zokulandelela idatha. Eminyakeni emibili ezayo, amakhukhi ezinkampani zangaphandle azophelelwa yisikhathi i-Google Chrome, umnyakazo olandela ezinye iziphequluli ezifana neSafari neFirefox eseziqalile kakade ukuvimba amakhukhi okulandelela ezinkampani zangaphandle. Apple futhi isiqalile ukubeka imikhawulo kudatha yomuntu siqu eqoqwe ezinhlelweni zokusebenza.
Okulindelwe ngabathengi nakho kuyashintsha.
U-76% wabathengi uthi noma ukhathazeke kakhulu ngokuthi izinkampani ziqoqa futhi zisebenzise kanjani idatha yazo yomuntu siqu. Ngaphezu kwalokho, u-59% wabathengi bathi bancamela ukuyeka ukuzizwisa komuntu siqu (isb, izikhangiso, izincomo, njll.) kunokuba umsebenzi wabo wedijithali ulandelelwe amabhrendi.
Gartner, Izindlela Ezingcono Kakhulu Zobumfihlo Bedatha: Ungawabuza Kanjani Amakhasimende Ulwazi Phakathi Nobhubhane
Ngokuzayo, singalindela imikhawulo eyengeziwe ukuze sivikele idatha yomuntu siqu. Lezi zici zikhomba isidingo sokubuyekeza kabusha izinqubo zokumaketha ukuze kuqinisekiswe ukuthi zihambisana nezinqubomgomo zikahulumeni kodwa futhi zibonisa imboni eshintshayo kanye nokulindelwe ngabathengi.
Izindaba ezinhle ukuthi ukuvikelwa kwedatha yekhasimende sekuvele kuyibhizinisi eliza kuqala kuma-SMB amaningi.
U-55% wama-SMB ahloliwe e-US ulinganisela idatha kanye nobuchwepheshe bokuphepha kolwazi njengento ebalulekile ekusebenzeni kwebhizinisi labo, okubonisa ukukhathazeka kokuvikela idatha yekhasimende. (Bheka ngezansi kwekhasi ukuze uthole indlela yokwenza inhlolovo.)
GetAppInhlolovo Yangowezi-2021 Ehamba Phambili Yamathrendi
Ibhizinisi lakho liyidlulisela kanjani imikhuba yakho yedatha kumakhasimende? Kulesi sigaba esilandelayo, sizofaka izinqubo ezihamba phambili zokumaketha okusobala okusiza ukuqinisa ubudlelwano bamakhasimende ngokuthembana.
Amathuluzi namathiphu okuthuthukisa imikhuba yokumaketha esobala
Nazi izinyathelo ezimbalwa abakhangisi abangazithatha namathuluzi okuwasebenzisa angasiza ukuthuthukisa izinqubo zokumaketha ezibonisa izinto.
Nikeza amakhasimende ukulawula okwengeziwe – Okokuqala nokubalulekile, kubalulekile ukunikeza amakhasimende amandla avumelana nezimo mayelana nendlela idatha yawo eqoqwa futhi esetshenziswa ngayo. Lokhu kuhlanganisa ukunikeza izinketho zokungena nokuphuma kumakhasimende abelana ngedatha yomuntu siqu. Isofthiwe yokukhiqiza ukuhola ingaba ithuluzi eliwusizo ngokukuvumela ukuthi udale amafomu ewebhusayithi aqoqa ngokusobala idatha yekhasimende.
Xhumana ngokusobala ukuthi idatha yekhasimende ivikelwa kanjani – Cacisa ukuthi uqoqa kanjani nokusebenzisa idatha yekhasimende. Chazela amakhasimende ngezenzo ozenzayo ukuze uvikele idatha yawo noma uma kukhona izinguquko ezenziwayo endleleni evikeleka ngayo. Ungakwenza lokhu ngokusebenzisa ithuluzi lokumaketha lakho konke ukuze uhlanganise imilayezo emayelana nokuvikelwa kwedatha yekhasimende kanye nokusetshenziswa eziteshini eziningi zokufinyelela.
Nikeza inani langempela ngokushintshanisa idatha – Abathengi bathi bayengwe imiklomelo yemali ukuze bathole idatha yabo yomuntu siqu. Cabangela ukunikeza inzuzo ebonakalayo kumakhasimende ngokushintshanisa idatha yawo. Isofthiwe yocwaningo iyindlela enhle yokucela ngokusobala nokuqoqa idatha ukuze uthole umvuzo wemali.
U-53% wabathengi uzimisele ukwabelana ngedatha yabo siqu ukuze bathole imiklomelo yemali kanye no-42% wemikhiqizo yamahhala noma amasevisi, ngokulandelanayo. Abanye abangu-34% bathi bangabelana ngedatha yomuntu siqu ukuze bathole izaphulelo noma amakhuphoni.
Phendula - Ukwamukela izicelo zekhasimende noma ukukhathazeka ngokushesha nangokusobala kuzosiza ukwakha ukwethembana, isinyathelo esibalulekile sokuhlangenwe nakho okuhle kwekhasimende. Amathuluzi anikezela ngokuzenzakalelayo kokumaketha, ukwenza kube ngokwakho, inkundla yezokuxhumana, i-imeyili, nemisebenzi yengxoxo angasiza ibhizinisi lakho ngokusebenza kahle nangokuqhubekayo kumakhasimende.
Cela impendulo – Impendulo iyisipho! Linganisa ukuthi amaqhinga akho okuthengisa asebenza kanjani ngokuya emthonjeni—amakhasimende akho. Ukuqoqa impendulo evamile kuvumela amaqembu okuthengisa ukuthi alungise amasu njengoba kudingeka. Ithuluzi locwaningo lwemakethe lingakusiza ukuthi uqoqe futhi uhlaziye idatha lapho uhlola amakhasimende akho.
Qinisekisa ukuthi unohlelo lobuchwepheshe bakho
Njengoba ngabelane ngenhla, kunezindlela eziningi zokusebenzisa amathuluzi ukusekela izinqubo zokumaketha ezisobala, kodwa ukuba nobuchwepheshe akwanele. Ku GetAppInhlolovo Yango-2021 Yamathrendi Ezokumaketha:
U-41% wabaqalayo bathi abakalwenzi uhlelo lobuchwepheshe babo bokumaketha. Ngaphezu kwalokho, iziqalo ezingenalo uhlelo lobuchwepheshe bokumaketha zinethuba eliphindwe kane lokusho ukuthi ubuchwepheshe bazo bokuthengisa abuhlangabezani nezinjongo zabo zebhizinisi.
GetAppUcwaningo lwango-2021 lwamathrendi ezokumaketha
Ibhizinisi lakho lingase libe nentshisekelo noma okwamanje lisebenzisa izinhlobo ezimbalwa zesofthiwe ukuze liqoqe idatha futhi lixhumane nezinqubo zedatha namakhasimende. Ukuze wenze okuhle kobuchwepheshe futhi uqinisekise ukusebenza kahle kwabo, kubalulekile ukwenza a uhlelo lobuchwepheshe bokumaketha futhi uyilandele.
Uma kuziwa ekukhangiseni okuthembekile nokusobala, kuningi okusengcupheni—ukwethembeka, ukwethenjwa kwamakhasimende, nokwethembeka. Lawa mathiphu ayisiqalo sokulungiselela ukushintshwa kwezwe ekuvikelweni kwedatha kuyilapho uqinisa ubudlelwano namakhasimende.
Vakashela GetApp ukubuyekezwa kwesofthiwe kanye nemininingwane yochwepheshe ukukusiza wenze izinqumo zamasu unolwazi.
GetAppI-Top Technology Trends Survey ka-2021 yenziwa kusukela ngo-Agasti kuya kuSepthemba 2021, phakathi kwabaphenduli abangu-548 e-US yonkana, ukuze kuhlonzwe izidingo zobuchwepheshe, izinselele, kanye nezitayela zamabhizinisi amancane. Abaphendula kwakudingeka ukuthi bahileleke ezinqumweni zokuthenga ubuchwepheshe ezinkampanini ezinezisebenzi ezingu-2 kuya kwezingu-500 futhi babe nesikhundla sezinga lomphathi noma ngaphezulu enkampanini.
GetAppI-Marketing Trends Survey yenziwa ngo-April 2021 phakathi kwabaphendula abangu-455 base-US ukuze bafunde kabanzi mayelana nokumaketha kanye namathrendi ezobuchwepheshe. Abaphendulile bahlolelwe izindima zokwenza izinqumo ekuthengisweni, ekukhangiseni, noma ezinsizeni zamakhasimende ezinkampanini ezinezisebenzi ezi-2 kuya kwezingu-250.
Tags: impendulo yomthengiubumfihlo babathengiucwaningo lwabathengiukwethemba abathengiidatha yekhasimendeukuvikelwa kwedatha yekhasimendeimpendulo yekhasimendeIdathaukuvikelwa kwedathagartneridatha ye-gartnerucwaningo lwe-gartnergetappi-Google Chromeuhlelo lobuchwepheshe bokumakethaukuthambekela kwezentengisoinhlolovo yezindlela zokumakethaimininingwane yomuntuokuhlangenwe nakho komuntu siqupiiukulandelela abathengi ku-inthanethi
UMeghan Bazaman ungumhlaziyi omkhulu ku GetApp, ukwabelana ngemininingwane mayelana nobuchwepheshe bokumaketha nesofthiwe esafufusa. Ufunde I-Advertising e-University of Texas e-Austin futhi unolwazi lokuhlanganisa ubuchwepheshe, abezindaba, ukunakekelwa kwezempilo kanye ne-ecommerce kusukela ngo-2011. Ngaphambi kokujoyina. GetApp, U-Meghan uphathe izifundo zocwaningo lokumaketha ezihlanganisiwe kanye nezinhlelo eziholayo zokumaketha okuqukethwe kwedatha ehamba phambili, imininingwane kanye nenkampani yokubonisana. Unolwazi olukhethekile ekwenzeni ucwaningo lwenhlolovo, enze ukubonwa kwedatha, kanye nokwethula imininingwane ebalulekile kubabambiqhaza.
I-Queue-it: Engeza Igumbi Lokulinda Elibonakalayo Kuwebhusayithi Yakho Ukuze Ulawule Ukunyuka Kwethrafikhi Okuphezulu